बाइबलका कथाहरू: येशू गोठमा जन्मिनुहुन्छ - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो सानो बालक को हो, तिमीलाई थाह छ? हो, उहाँ येशू हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै गोठमा जन्मिनुभएको छ। गोठ भनेको जनावर राख्ने ठाउँ हो। गधा अनि अरू जनावरका लागि खानेकुरा राख्ने डुँडमा मरियमले येशूलाई सुताउँदैछे। तर मरियम र यूसुफ यहाँ जनावर राख्ने ठाउँमा किन छन्? यो पनि बच्चा जन्माउने ठाउँ हो र?
होइन। तर उनीहरू यहाँ बसनुपरेको कारण छ। रोमको राजा, सिजर अगस्टसले सबैले आफू जन्मेको सहरमा गएर आ-आफ्नो नाउँ लेखाउनुपर्छ भन्ने हुकुम गरेको थियो। यूसुफ बेतलेहेममा जन्मेको थियो। तर ऊ र मरियम बेतलेहम पुग्दा त उनीहरूले बस्ने को पाएनन्। यसकारण, उनीहरू यहाँ जनावर राख्ने ठाउँमा बस्नुपऱ्यो। मरियमले गोठमै येशूलाई जन्माई! तर हेर, उहाँ स्वस्थ देखिनुहुन्छ।
चित्रमा येशूलाई भेट्न आउने गोठालाहरूलाई पनि तिमीले देख्यौ कि? उनीहरू राती चौरमा भेडा कुरेर बसिरहेका थिए। अचानक वरिपरि उज्यालो भयो। एक जना स्वर्गदूत उभिरहेको देखेर गोठालाहरू धेरै डराए। तर स्वर्गदूतले यसो भने: ‘नडराओ! किनभने हेर, म तिमीहरूलाई आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु। आज बेतलेहेममा प्रभु ख्रीष्ट जन्मिनुभएको छ। उहाँले नै मान्छेहरूलाई बचाउनुहुनेछ! तिमीहरूले उहाँलाई कपडाले बेह्रेर डुँडमा सुताइरहेको भेट्टाउनेछौ।’ अचानक अरू थुप्रै स्वर्गदूत देखा पर्छन् र परमेश्वरको प्रशंसा गाउन थाल्छन्। त्यसपछि तुरुन्तै यी गोठालाहरू येशूलाई खोज्न जान्छन्। उनीहरूले स्वर्गदूतले भनेकै ठाउँमा येशूलाई भेट्टाउँछन्।
येशू किन विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ, तिमीलाई थाह छ? उहाँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ, तिमी भन्न सक्छौ? यस किताबको पहिलो कथामा हामीले परमेश्वरको जेठो छोरोको विषयमा पढेका थियौं नि। के तिमीलाई याद छ? यहोवाले स्वर्ग र पृथ्वी अनि अरू सबै कुरा बनाउनुहुँदा उहाँले पनि सँगै मिलेर काम गर्नुभएको थियो भनेर हामीले पढेको थियौं। हो, परमेश्वरको त्यो जेठो छोरो नै येशू हुनुहुन्छ!
यहोवाले आफ्नो छोरोको जीवनलाई स्वर्गबाट मरियमको गर्भभित्र सार्नुभयो। त्यसपछि अरू शिशुहरूजस्तै येशू पनि मरियमको शरीरभित्र बढ्न थाल्नुभयो। अन्तमा, हामीले भर्खरै पढेजस्तै उहाँ बेतलेहेमको गोठमा जन्मिनुभयो। येशू जन्मिनुभयो भनेर अरूलाई बताउन स्वर्गदूतहरू किन त्यति धेरै खुसी भएका रहेछन्, तिमीले बुझ्यौ त।
चित्रको सानो बच्चा को हुनुहुन्छ र मरियमले उहाँलाई कहाँ सुताउँछे?
येशूको जन्म किन गोठमा हुन्छ?
ढोकाबाट भित्र छिर्न लागेका मान्छेहरू को हुन्, चित्र हेरेर बताऊ। स्वर्गदूतले उनीहरूलाई के भनेका थिए?
येशू किन विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ?
येशूलाई परमेश्वरको छोरा किन भन्न सकिन्छ?
लूका २:१-२० पढ्नुहोस्।
येशूको जन्मबारे गरिएको भविष्यवाणी पूरा गर्न सिजर अगस्तसको पनि कस्तो भूमिका रह्यो? (लूका २:१-४; मीका ५:२)
‘[परमेश्वर] प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूको’ गन्तीमा पर्न के गर्नुपर्छ? (लूका २:१४; मत्ती १६:२४; यूह. १७:३; प्रेरि. ३:१९; हिब्रू ११:६)
मुक्तिदाता जन्मिनु भएको थाह पाउँदा मात्र पनि यहूदाका साधारण गोठालाहरू त खुसी भए भने अहिले परमेश्वरका जन किन झन् धेरै खुसी हुनुपर्छ? (लूका २:१०, ११; एफि. ३:८, ९; प्रका. ११:१५; १४:६)